Oge Ankara Istanbul Train Times | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraUsoro Ihe Omume Ankara Istanbul
10 / 11 / 2019 06 Ankara, 34 Istanbul, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Mpaghara Marmara, Turkey
Oge An train Istanbul Train Hours: highgbọ njem elu-elu nke gbara gburugburu abanyela na ndụ anyị, na-eme ka ọ dị mfe ma na-atọkwu ụtọ njem. CDgbọ njem TCDD na-enye gị ohere njem a na-agaghị echefu echefu site na ijikọ ihe niile na mmepe nke teknụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị ọsọ. Karagbọ oloko elu Ankara-Istanbul, Ankara-Istanbul na Istanbul Njem 6 Rụọ ọrụ.
Traingbọ ahụ na-apụ na Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze na-akwụsị ma rute Pendik n'ihe dị ka nkeji 4 elekere 15. Ebe ọ bụ na nnukwu ụgbọ elu Ankara-Istanbul anaghị akwụsị na nkwụsị ụfọdụ, enwere ike ịdị iche na oge ọbịbịa nke ụgbọ ahụ.
Na ụgbọ okporo ígwè Ankara-Istanbul na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ị nwere ike ịbanye na Istanbul n'oge dị mkpirikpi ma na-etinyekwu oge na ọrụ gị na onwe gị. N'ụzọ dị otú a, ị na-echekwa oge na inwe oge àgwà. A na-atụle ụdị mkpa dị iche iche nke ndị njem nọ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ ma jiri ya mee ka onye ọ bụla nwere ụgbọ ala ndị njem nwere ụkpụrụ dị iche. Na ntụziaka a, e nwere ụdị ụgbọala atọ dị iche iche: pulman, azụmahịa na nri abalị. Ụgbọ okporo ígwè Pulman na-agụnye ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè. Ụlọ nri na-eri nri nwere tebụl na ụlọ nri. TCDD Ụgbọ njem, nke na-elebara mkpa nke ndị njem anya, na-enye gị mkpa dịka ntọala eletrik, WC na washbasins na ụgbọ ala.
Ankara Istanbul Olee elele elekere asaa site na ụgbọ oloko?
Oge Ankara-Istanbul akwa ọsọ ụgbọ elu maka oge ndị njem awara awara bụ elekere 3 awa 58, oge njem ndị na-anaghị ekwupụta njem dịkwa Oge 4 nke nkeji 15 ile Oge 4 nke nkeji 30 n'etiti. N'okpuru ebe a bụ okpokoro zuru ezu maka oge ọpụpụ ụgbọ oloko ahụ.
Ndokwa Usoro Ọzụzụ Ankara Istanbul
ụgbọ 1 2 3 4 5 6 7 8
A na-enye ndị njem ụgbọelu Ankara Istanbul YHT tiketi gụnyere tiketi na-agbanwe agbanwe na ọkọlọtọ. Ego ọnụego dị iche iche na-emetụta ndị njem.
Akara-İstanbul High Speed ​​Train tiketi Ahịa bụ 70.00 TL maka tiketi ọkọlọtọ, 84.00 TL maka tiketi mgbanwe, 101,50 TL maka tiketi Business Standard na 122,00 TL maka azụmahịa Flexible tiketi.
Map Ankara Istanbul Train Map
Adapazari (Arifiye) na Istanbul (Pendik) Train Times
Akara Istanbul Fast Train Ticket Ahịa
Ankara - Oge Istanbul Speed ​​Speed